လတျတလော နာမညျကွီးနတေဲ့ “ကိုရေ ဘာတှလေဲ” သီခငျြးကို ထိထိမိမိ ဝဖေနျလိုကျတဲ့ ဉီးကောငျးကြျော – Askstyle
လတျတလော နာမညျကွီးနတေဲ့ “ကိုရေ ဘာတှလေဲ” သီခငျြးကို ထိထိမိမိ ဝဖေနျလိုကျတဲ့ ဉီးကောငျးကြျော
လတ်တလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ “ကိုရေ ဘာတွေလဲ” သီချင်းကို ထိထိမိမိ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဉီးကောင်းကျော်
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်တိုင်အောင် ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဉီးကောင်းကျော်ကတော့ သူကျင်လည်ခဲ့တဲ့ အနုပညာလောကကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်သူ တစ်ဉီးပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ဉီးကောင်းကျော်က လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရေ ဘာတွေလဲ ဆိုတဲ့သီချင်းဗီဒီယိုကို ထိရောက်စွာ ဝေဖန်လိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ စကားပြောရင် အရမ်းထိမိတဲ့ ဉီးကောင်းကျော်ကတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အချစ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ပါဝင်တဲ့ အဆိုပါသီချင်းဗီဒီယိုကို ပညာသားပါပါနဲ့ ထိထိမိမိ ဝေဖန်လိုက်တာပါနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း သရုပ်ဆောင်မှုတွေပါဝင်နေတဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုအပေါ် ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဉီးကောင်းကျော်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကောင်းကျော်ကတော့ “ကို ရေ ဘာတွေလဲ ????? facebook ပေါ်မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ ဤကဲ့သို့ အမြင်မတင့်သည့် ပုံများကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ဘာတြွေဖစ်ကြတာပါလိမ့်ပေါ့ နော် ?????ထင်လိုက်တာက လက်စွမ်းထက်လှတဲ့မြန်မာချောင်းရိုက် ကင်မရာမင်းများရဲ့လက်စွမ်းပြကွက်တွေထဲ ထိုသူတော့မိသွားပြီ မှတ်လိုက်တာ ပေါ့ ????မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က cbကနေ သီချင်းဖိုင်လေး ပို့ပေးလို့ ဘာပါလိမ့် ဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှ အော်ဒီလို ကိုး ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်လေ??သီချင်းဖိုင်လေးကို စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဦးဆုံးအထင်ကြီးလေးစားသွာတာက အဆိုတော် မမ ????တေးရေး တေးဆို အဆိုတော် ဒါရိုက်တာ ဆိုတော့ လေးစားပြီလေ??ဒီခေတ်မှာ ဒီလိုအရည်အချင်းမျိုးရှိတဲ့ အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်ဆိုတာရှားပါးသွားပြီ ဒီတော့ သေချာကြည့်ရှု့ခံစား မိသည်ပေါ့ ???
?တေးစာသား ********* (မှတ်သားထိုက်သည် ဂန္တဝင်မြောက်စာသားများ ။)တေးဆိုသူ(မထူးခြားသော အသံပါရမီရှင်မျိုး)သရုပ်ဆောင်(ဟိုးရှေ့က စီနီယာ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မမ များ လုံးဝမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ လွန်စွာအသက်ပါတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုများ)ဒါရိုက်တာ ( အခုခေတ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ mtvလူငယ်ဒါရိုက်တာတွေ မြောင်းထဲရောက်သွားလောက် ထူးခြားစွမ်းအားကြီးသည့် နောက်ဆုံးပေါ် အထူးပြုလုပ်ချက် ပါဝင်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေနဲ့)ဆိုမှတော့ဒီသီချင်း mtvက အကုန်လုံးပေါက်ပြီပေါ့ ဗျာ ဒါကြောင့်လဲ လျပ်တစ်ပျက်အတွင်မှာ ဒီလောက်ကျော်ကြားသွားတာနေမှာပေါ့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီသီချင်းဖြစ်မြောက်အောင် ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြသည့် သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ တေးရေး တေးဆို များအားလုံးကို လေးစားအားကျမိတယ်??
မောင်နဲ့နှမ သားနဲ့အမိမိသားစု တွေ မျက်စိမဖွင့်ရဲလောက်အောင် ကောင်းလွန်းတဲ့ နောင်လာမည့်မျိုးဆက်သစ် များအတွက် ဂန္တဝင်မြောက် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ပါသည်ဗျာ ?????(သီချင်းဖိုင်ကတော့ ကြော်ငြာပေးသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ မတင်ပေးတော့ပါ)ကိုင်း ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဗျာ ???ကောင်းကျော်” ဆိုပြီး လတ်တလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရေ ဘာတွေလဲ သီချင်းကို ဝေဖန်ထားတာပါ။
ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း အချစ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ “ကိုရေ ဘာတွေလဲ” သီချင်းကို ထိထိမိမိ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဉီးကောင်းကျော်ရဲ့အမြင်ကို ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာ ပြောသွားခဲ့ပါဉီးနော်။
ခဈြပရိသတျတှကေလဲ ဒီ MVလေးကို ကွညျ့ပွီးဝဖေနျပေးခဲ့ကွပါဦး။ အားလုံးကိုကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။
ဆယျစုနှဈတဈခုကြျောတိုငျအောငျ ပရိသတျတှကေို ဖြျောဖွခေဲ့တဲ့ ဟာသလူရှငျတျောကွီး ဉီးကောငျးကြျောကတော့ သူကငျြလညျခဲ့တဲ့ အနုပညာလောကကို အကောငျးဆုံးဖွဈစခေငျြသူ တဈဉီးပါ။ လတျတလောမှာတော့ ဉီးကောငျးကြျောက လူမှုကှနျယကျမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ ကိုရေ ဘာတှလေဲ ဆိုတဲ့သီခငျြးဗီဒီယိုကို ထိရောကျစှာ ဝဖေနျလိုကျတာ တှရေ့ပါတယျ။ စကားပွောရငျ အရမျးထိမိတဲ့ ဉီးကောငျးကြျောကတော့ ခပျကွမျးကွမျး အခဈြဇာတျဝငျခနျးတှေ ပါဝငျတဲ့ အဆိုပါသီခငျြးဗီဒီယိုကို ပညာသားပါပါနဲ့ ထိထိမိမိ ဝဖေနျလိုကျတာပါနျော။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ခပျကွမျးကွမျး သရုပျဆောငျမှုတှပေါဝငျနတေဲ့ သီခငျြးဗီဒီယိုအပျေါ ဝဖေနျလိုကျတဲ့ ဉီးကောငျးကြျောရဲ့အကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကောငျးကြျောကတော့ “ကို ရေ ဘာတှလေဲ ????? facebook ပျေါမှာ မွငျလိုကျရတဲ့ ဤကဲ့သို့ အမွငျမတငျ့သညျ့ ပုံမြားကိုတှလေို့ကျရတော့ ဘာတွှဖေဈကွတာပါလိမျ့ပေါ့ နျော ?????ထငျလိုကျတာက လကျစှမျးထကျလှတဲ့မွနျမာခြောငျးရိုကျ ကငျမရာမငျးမြားရဲ့လကျစှမျးပွကှကျတှထေဲ ထိုသူတော့မိသှားပွီ မှတျလိုကျတာ ပေါ့ ????မိတျဆှတေဈယောကျက cbကနေ သီခငျြးဖိုငျလေး ပို့ပေးလို့ ဘာပါလိမျ့ ဆိုပွီး ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့မှ အျောဒီလို ကိုး ဆိုတာသိလိုကျရတယျလေ??သီခငျြးဖိုငျလေးကို စဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ဦးဆုံးအထငျကွီးလေးစားသှာတာက အဆိုတျော မမ ????တေးရေး တေးဆို အဆိုတျော ဒါရိုကျတာ ဆိုတော့ လေးစားပွီလေ??ဒီခတျေမှာ ဒီလိုအရညျအခငျြးမြိုးရှိတဲ့ အမြိုးသမီး အနုပညာရှငျဆိုတာရှားပါးသှားပွီ ဒီတော့ သခြောကွညျ့ရှု့ခံစား မိသညျပေါ့ ???
?တေးစာသား ********* (မှတျသားထိုကျသညျ ဂန်တဝငျမွောကျစာသားမြား ။)တေးဆိုသူ(မထူးခွားသော အသံပါရမီရှငျမြိုး)သရုပျဆောငျ(ဟိုးရှကေ့ စီနီယာ အဆိုတျော သရုပျဆောငျမမ မြား လုံးဝမလုပျနိုငျခဲ့တဲ့ လှနျစှာအသကျပါတဲ့ သရုပျဆောငျမှုမြား)ဒါရိုကျတာ ( အခုခတျေ နာမညျကွီးနတေဲ့ mtvလူငယျဒါရိုကျတာတှေ မွောငျးထဲရောကျသှားလောကျ ထူးခွားစှမျးအားကွီးသညျ့ နောကျဆုံးပျေါ အထူးပွုလုပျခကျြ ပါဝငျတဲ့ ရိုကျခကျြတှနေဲ့)ဆိုမှတော့ဒီသီခငျြး mtvက အကုနျလုံးပေါကျပွီပေါ့ ဗြာ ဒါကွောငျ့လဲ လပျြတဈပကျြအတှငျမှာ ဒီလောကျကြျောကွားသှားတာနမှောပေါ့ ဘာဘဲဖွဈဖွဈ ဒီသီခငျြးဖွဈမွောကျအောငျ ပူပေါငျးပါဝငျပေးကွသညျ့ သရုပျဆောငျ ဒါရိုကျတာ တေးရေး တေးဆို မြားအားလုံးကို လေးစားအားကမြိတယျ??
မောငျနဲ့နှမ သားနဲ့အမိမိသားစု တှေ မကျြစိမဖှငျ့ရဲလောကျအောငျ ကောငျးလှနျးတဲ့ နောငျလာမညျ့မြိုးဆကျသဈ မြားအတှကျ ဂန်တဝငျမွောကျ သီခငျြးတဈပုဒျကို ဂုဏျပွုမှတျတမျးတငျပါသညျဗြာ ?????(သီခငျြးဖိုငျကတော့ ကွျောငွာပေးသလိုဖွဈမှာစိုးလို့ မတငျပေးတော့ပါ)ကိုငျး ဘယျလိုလုပျကွမလဲ ဗြာ ???ကောငျးကြျော” ဆိုပွီး လတျတလော နာမညျကွီးနတေဲ့ ကိုရေ ဘာတှလေဲ သီခငျြးကို ဝဖေနျထားတာပါ။
ခဈြပရိသတျတှလေညျး ခပျကွမျးကွမျး အခဈြဇာတျဝငျခနျးတှပေါလို့ နာမညျကွီးနတေဲ့ “ကိုရေ ဘာတှလေဲ” သီခငျြးကို ထိထိမိမိ ဝဖေနျလိုကျတဲ့ ဉီးကောငျးကြျောရဲ့အမွငျကို ဘယျလိုသဘောရလဲဆိုတာ ပွောသှားခဲ့ပါဉီးနျော။